I-NGL Recovery Unit Factory | I-China NGL Recovery Unit Manufacturers, Suppliers
Eyenzelwe i-1~6 mmscfd LPG indawo yokutakula yakha inkampani yaseShayina
Kungani ukubuyisela uketshezi lwegesi yemvelo: Ukuthuthukisa ikhwalithi yegesi yemvelo, ukunciphisa indawo yamazolo e-hydrocarbon futhi kuvimbele ukufiphala kwe-hydrocarbon ewuketshezi ekuthuthweni kwamapayipi; Imikhiqizo ye-condensate etholiwe ingamafutha omphakathi abalulekile kanye nophethiloli wamakhemikhali; Izinga eliphelele lokusebenzisa izinsiza linikeziwe, elinezinzuzo ezinhle zezomnotho.
Isikhungo sangokwezifiso se-LPG sokutakula i-skid e-liquefied petroleum gas recovery plant
I-LPG igesi ye-petroleum eyi-liquefied, ekhiqizwa lapho kucwengwa uwoyela ongahluziwe noma oshiswe ohlelweni lokusebenzisa uwoyela noma igesi yemvelo. I-LPG ingxube kawoyela negesi yemvelo eyakhiwe ngaphansi kwengcindezi efanele futhi itholakala njengoketshezi ekamelweni lokushisa. I-LPG (I-Liquefied Petroleum Gas) isetshenziswa kabanzi njengamanye amafutha ezimoto, kodwa futhi ifaneleka njengesitokwe samakhemikhali. Iqukethe i-propane ne-butane (C3/C4). Ukuze kutholwe kabusha i-LPG/C3+ i-Engineering Division inikeza i-absorber pr...
Isixazululo esihlanganisiwe Sokubuyiswa Kweziketshezi Zegesi Yemvelo esivela kumphakeli waseShayina
Inani loketshezi lwegesi yemvelo, njenge-ethane ne-propane, liyakhula ngenxa yesidingo esikhulayo somhlaba wonke sokuphakelwa kwe-petrochemical feedstock, ukufudumeza namandla. Izixazululo zokutholwa kwe-Rongteng natural gas liquids (NGL) zikhethekile ukuze kwandiswe ukululama kuyilapho zikunikeza ukuguquguquka okuphezulu kokusebenza kanye nenzuzo enkulu ekutshalweni kwezitshalo.
Ngokwezifiso 2~14 104 I-Nm3/d ukukhanya kwe-hydrocarbon recovery skid yegesi yemvelo
I-hydrocarbon ekhanyayo, eyaziwa nangokuthi i-condensate yegesi yemvelo (NGL), ihlanganisa i-C2 ~ C2 + ekubunjweni kwayo futhi iqukethe izingxenye ze-condensate (C3 ~ C5).Ukuthola kabusha kwe-hydrocarbon ekhanyayo kubhekisela ekubuyiselweni kwezingxenye ezinzima zegesi yemvelo kune-methane noma i-ethane ewuketshezi. .
Iyunithi yokutakula ye-NGL
Ukutholwa kwe-hydrocarbon ekhanyayo kubhekise ohlelweni lokuthola kabusha uketshezi lwezingxenye ezinzima zegesi yemvelo kune-methane noma i-ethane. Ngakolunye uhlangothi, ihlose ukulawula indawo yamazolo e-hydrocarbon yegesi yemvelo ukuze ifinyelele inkomba yekhwalithi yegesi yezohwebo futhi igweme ukugeleza kwezigaba ezimbili zegesi-uketshezi.